Niahiahy an-ramatoa vadiny ho mampirafy azy amin’ny lehilahy hafa mantsy ny mpitandro ny filaminana iray, ka dia nambanany tamin’ny basy io vadiny io. Rehefa raikitra ny fifamaliana dia sorena loatra ity rangahy ka nahatifitra an’ilay ramatoa teo amin’ny sandriny havanana. Tsy ahiana ny ain’ilay ramatoa, saingy mbola marefo ny fahasalamany.
Tsy mifanalavitra tamin’izay koa ilay nitranga tao Toliara tamin’ny volana aogositra lasa teo. Noloaran’ny lehilahy iray tamin’ny antsy sy zava-maranitra ny mason’ny vadiny, izay vehivavy iray vao 25 taona no noloaram-badiny, vokatry ny hasarotam-piaro. Nahian’ny vadiny ho mampirafy azy sy mamoaka vola ivelan’ny tokantrano ity vehivavy ity, antony nampiharany herisetra mafy toy izany. Tsy maty anefa io vehivavy io ka afaka nitory tamin’ny zavatra nihatra taminy.
Mety hamono fitiavana sady mety hanimba ny natsangana rehetra ny hasarotam-piaro tsy voafehy ao anatin’ny iray minitra. Ny vahaolana tsara indrindra eo amin’ny mpivady miaina izany dia ny miezaka mifehy azy io. Amin’ny fotoana tena tsy azo ialana kosa dia mila mahay mifehy tena sy manindry fo, mba tsy hiteraka olana hafa izany avy eo. Omeo fahalalahana koa ny vady mba tsy hahatsiaro ho voafehy mafy sy te hitroatra. Vahaolana mahomby koa ny fifanajana ny maha-olona. Ankoatra ireo, raha hita fa karazan’olona tena mahavita zava-doza noho ny hasarotam-piaro ny vadinao, dia aleo misintaka sy mangina ary tsy manamarin-tena, ka miandry azy ho tony tanteraka vao miresaka. Mety ho vahaolana hisorohana ny loza ateraky ny hasarotam-piaro koa ny fisarahan-toerana, fisarahana efitrano, … mandrapilamin’ny toe-draharaha.